I-US iya kunyanzelisa isigunyaziso sokugonya i-COVID-19 kumashishini abucala emva koNyaka oMtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-US iya kunyanzelisa isigunyaziso sokugonya i-COVID-19 kumashishini abucala emva koNyaka oMtsha
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-US iya kunyanzelisa isigunyaziso sokugonya i-COVID-19 kumashishini abucala emva koNyaka oMtsha.
Kubalulekile ukuqonda ukuba kusekho abasebenzi abaninzi abangakhuselekanga kwaye bahlala besengozini yokugula kakhulu okanye basweleke ngenxa ye-COVID-19.
I-US izakuqala ukunyanzelisa ugonyo lwe-coronavirus olunyanzelekileyo kubasebenzi becandelo labucala ukuqala nge-4 kaJanuwari.
Ukungaphumeleli ukuthobela isigunyaziso sokugonya kuya kubangela izohlwayo ezinzima kumashishini, aza kujongana nesohlwayo esimalunga ne-14,000 yeedola ngokutyeshela.
Izohlwayo ziya kunyuka ngokuphulwa okuphindaphindiweyo, amagosa aphezulu athi.
The INdlu yeNdlu ibhengeze namhlanje ukuba i-US izakuqala ukunyanzelisa isigunyaziso sikaMongameli u-Biden's COVID-19 kubasebenzi becandelo labucala ukuqala nge-4 kaJanuwari 2022.
Ugonyo olunyanzelekileyo lwe-coronavirus kumashishini luya kunyanzeliswa emva koNyaka oMtsha, ngokwenkonzo yeendaba eWhite House. Abo bangagonywanga kuya kufuneka bavavanywe rhoqo ngeveki.
"Kubalulekile ukuqonda ukuba kusekho abasebenzi abaninzi abangakhuselekanga kwaye bahlala emngciphekweni wokugula kakhulu okanye basweleke ngenxa ye-COVID-19," utshilo ingxelo yenkonzo ye-White House.
Ukungaphumeleli ukuthobela isigunyaziso sogonyo lwe-COVID-19 kuya kufumana izohlwayo ezinzima kumashishini, aya kujongana nesohlwayo esimalunga ne-14,000 yeedola ngokutyeshela.
Izohlwayo ziya kunyuka kunye nolwaphulo-mthetho oluninzi, oluphezulu INdlu yeNdlu Amagosa athi. Akukhange kucace kwangoko ukuba abasebenzi banokugxothwa na ukuba bayala ukugonywa okanye ukuvavanywa.
Imfuno yokuba iikontraka zomdibaniso zigonywe iye yatyhalelwa emva kwinyanga kwaye iya kunyanzeliswa kwangomhla ofanayo.
"Ngomhla we-4 kaJanuwari, ngo-2022, izibonelelo [zononophelo lwezempilo] kufuneka ziqinisekise ukuba bonke abasebenzi bafumene izitofu eziyimfuneko ukuze bagonywe ngokupheleleyo - nokuba ziidosi ezimbini zePfizer, iidosi ezimbini zeModerna, okanye idosi enye kaJohnson & Johnson," INdlu yeNdlu Igosa eliphezulu latsho.